ဝါးခယ်မ : ဒုရဲမှုး မိုးရန်နိုင် သတင်းများ စုစည်းမှု - ၁
ဒုရဲမှုး မိုးရန်နိုင် သတင်းများ စုစည်းမှု - ၁
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဒုရဲမှုး မိုးရန်နိုင် နဲ. ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေအတော်ဟော့ခဲ့ပါတယ် ။ မှန်တယ် / မှားတယ် ၊ သစ္စာရှိတယ် / သစ္စာဖောက်တယ် ၊ နိုင်ငံအတွက်ပဲ ကြည့်ရမယ် / အမှန်တရားဘက်ပဲကြည့်ဖို.လိုတယ် ဆိုပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုး ၊ အရေးအသားအထွေထွေ ၊ တင်ပြမှု အစုံစုံ မြင်တွေ.နေရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူနဲ.ပတ်သက်တဲ့ ရေးသားမှုတွေ ၊ အယူအဆတွေကို စုစည်း တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ. ပတ်သက်လို. Facebook မှာ Aung Htut Thet ဆိုတဲ့ အကောင့်က ခုလိုရေးသားခဲံ့ပါတယ်
အဲဒီဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါ။...ဘဂါင်္လီလော်ဘီ ရိုက်တာ သတင်းထောက် ဝလုံးနဲ့ ကျော်စိုးဦး မောင်တော အင်းဒင်ရွာကိစ္စကို သတင်းအနံ့ရတယ်။ သတင်းရဖို့ လိုက်တော့ အဲဒီတုန်းက အင်းဒင်ရွာမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင် နဲ့ ချိတ်ဆက်မိတယ်။ ငွေနဲ့အောပြီးသတင်းဝယ်တယ်။ ရောင်းတယ်။ ဘဂါင်္လီ ၁၀ ယောက်သတ်ခံရတဲ့သတင်း ရိုက်တာ ကတဆင့် ပျံ့သွားတယ်။ အထျိုးဆက်အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ တပ်မတော်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အရေးယူခံရတယ်။ သတင်းပေါက်ကြားမှုကို စိစစ်တော့ အခင်းဖြစ်ချိန် အင်းဒင်ရွာမှာတာဝန်ကျခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်ပြောင်းရသူ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိင် ပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ဦးအားဖော်ထုတ်ရရှိတယ်။စိစစ်ချက်အရ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်နဲ့ရဲတပ်ကြပ်ခင်မောင်လင်းတို့၂ဦး သည်ရိုက်တာသတင်းထောက် ဝလုံးနှင့်ကျော်စိုးဦးအား သတင်းပေါက်ကြားစေခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရရှိတယ်။ သက်သေမခိုင်လုံသူကျန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။ ရိုက်တာသတင်းထောက်၂ဦးမှထပ်မံ၍ နိုင်ငံတော်လျို့ဝှက်ချက်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သတင်းရယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ရှိပြီးဖြစ်သူ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်အား စားသောက်ဆိုင်သို့ ချိန်းဆိုချက်ကို ကြိုတင်သတင်းရရှိသဖြင့် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်အသွင်ယူကာ တရားခံသတင်းထောက်များအားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ တရားလိုသက်သေအဖြစ် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်အားတင်သွင်းစဉ် ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်အရေးယူခံရတော့မည်ဖြစ်ရာ သေမထူးနေမထူးသဘောဖြင့် အထက်လူကြီးမှရိုက်တာသတင်းထောက်၂ဦးအားထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးစေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သရဲဘောကြောင်စွာလိမ်လည်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်။
မိသားစုကိုလည်း လိုင်းခန်းမှချက်ခြင်းဆင်းခိုင်းတယ်...စသည်ဖြင့် မီဒီယာအားကို သုံးကာ ဇာတ်နာအောင်ရေး...လူအများမျက်ရည်ချူ...အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်အောင်လုပ်...အမှားကိုအမှန်...
လူဆိုးကိုလူကောင်းထင်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ အဓိကကတော့ ဘဂါင်္လီလော်ဘီတွေရဲ့ တိုက်ကွက်တွေပဲ။ ဘဂါင်္လီလော်ဘီရိုက်တာသတင်းထောက်တွေ လွတ်အောင်...ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘဂါင်္လီကိစ္စရှုပ်ထွေးအောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီးလှုံဆော်နေတယ်။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ကိုအသုံးချပြီးသူရဲကောင်းသဖွယ်လှည့်စားပုံဖော်လာတယ်။ တကယ်တော့သူက နိုင်ငံသစ္စာဖောက်ဝန်ထမ်းပျက်ပဲ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူကိုယူရမှာပါ။ ဘဂါင်္လီအလိုတော်ရိတွေ...ဘဂါင်္လီလော်ဘီတွေရဲ့ တိုက်ကွက်..လှည့်ကွက်အောက်မှာ တို့နိုင်ငံသားများ မျက်စေ့လည်မသွားစေနဲ့။ မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ ညံ့ရင်တော့...မညီညွတ်ရင်တော့ ကုလားစားသွားမယ်။ အမြင်မှန်...သဘောပေါက်သူများ မီဒီယာအားကို သုံး၍ အဖြစ်မှန်ကို မျှဝေစေချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ရဲ. မိသားစု ကို လိုင်းခန်းမှချက်ခြင်းရွှေ့ပြောင်းပေးဖို. ဖုန်းဆက်လို.ဆိုပြီး သူ.ရဲ.အမျိုးသမီးဖြစ်သူ တင်လာတဲ့ Post ဟာလည်းဒီဖြစ်ရပ်ကိုအများပို စိတ်ဝင်စားလာစေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ. ပတ်သက်လို. ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏မိသားစု လိုင်းခန်းမှရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်အပေါ်
ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုး၏ ဖြေကြားချက် ဆိုပြီး ဒါးဇ (အကုန်သိသတင်းဌာန) ကတော့ အခုလိုရေးသားတင်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။
သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း
ဧပြီလ ၂၀ ရက်က အင်းစိန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး (၁၄) ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်မှ ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီလ ၂၁ ရက် (ယနေ့) နံနက်ပိုင်းက ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် မိသားစုဝင်များအား နေပြည်တော်ရှိ ရဲလိုင်းခန်းမှ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည့်သတင်းများ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့် သတင်းဌာနအချို့တွင် ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီးမျိုးသူစိုးအား အကုန်သိ သတင်းဌာနမှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ . . .
မေး။ ။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင် မိသားစုကို လိုင်းခန်းပေါ်ကနှင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့က ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်တို့မိသားစုဝင်တွေကိုနှင်ချတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ လလောက်ကတည်းကနေပြည်တော်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ရဲအုပ်အဆင့်ကနေ ဒုရဲမှူးအဆင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ပြီးတော့မှအမှတ်(၈)လုံခြုံရေးရဲတပ်ရင်းကိုပြောင်းရွေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုင်းခန်းတွေရဲ့စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းအရ တပ်ဖွဲ့ဝင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့မိသားစုဝင်တွေလည်း သူပြောင်းသွားတဲ့နေရာကို လိုက်ပါပြောင်းရွေ့နေထိုင်သွားရမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ရဲ့မိသားစုမှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရမယ့် ကလေးတွေရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့် သူ့ကလေးတွေရဲ့စာမေးပွဲရာသီပြီးတဲ့အထိနေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲဒါကိုသူ့မိသားစုဝင်တွေ
မေး။ ။ အဲဒီလိုပြောင်းရွှေ့ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာက နှင်ချတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ နှင်ချတာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာသူ့လိုပဲ ပြောင်းရွေ့ရမယ့်သူတွေရှိတယ်။ပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့တွေကလည်း ကလေးတွေစာမေးပွဲရာသီပြီးဆုံးကတည်းကပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားပြီပေါ့လေ။သူတို့ကကျန်နေသေးတာပေါ့။
ဆိုတာကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးအတွက်အပြည့်အစုံရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာပဲ လူတွေကသနားနေကြတာလေ အခုဟာက။အဲဒီတော့ အပြင်မှာသူတို့လိုမျိုးနေနေရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်မှာလည်း စာနာကြရဲ့လားဆိုတာကို ပြန်မေးချင်တာပါ။
အခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
ဒီဖြစ်ရပ် ဖြစ်လာတဲ့နောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှုအတန်း အရက်ရောဆုံးလို.တရားဝင်အမည်ပေါက်နေတဲံ့ မြန်မာတို.ရဲ.ထုံးစံအတိုင်း အလှုခံ ကိစ္စတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ။ လူမှုရေးအရ စာနာသူတွေ ၊ နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ကူအားပေးလိုသူတွေ စသည်ဖြင့် ကိုယ်.ယုံကြည်ချက်နဲ.ကိုယ် ကူညီလိုသူတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် ။ဒါနဲ.ပတ်သက်လို. ထက်ဦး ဆိုတဲ့ အကောင့်ကတော့ ခုလိုသတိပေးရေးသားလာခဲ့တာကို Ag Ko Ko ဆိုတဲ့အကောင့်က ဖြန်.ဝေတင်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။
ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်ကိစ္စကို လူသားချင်းစာနာမိသူတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒေါသထွက်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက ဖြစ်လည်းဖြစ်သင့်တာတွေမို့ လွန်ဆန်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ အရာရာက အမှန်တရားအတိုင်း၊ ဥပဒေအတိုင်း သွားမှာပဲ။ မဖြစ်သင့်တာကတော့ ကြားလူတွေက မျောက်ပြဆန်တောင်း လုပ်ပြီး အလှူငွေတွေ တွန်းကောက်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ကာယကံရှင်က မျက်ရည်ခံထိုး သနားအောင်လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စပဲ။
မတူးတူးတို့ဟာ အခု သူ့အကိုရဲ့ အိမ်မှာ သွားနေကြတယ်။ ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ရဲ့ အစ်ကိုဆိုတာ နေပြည်တော်မှာ ပထမဆုံး ဘူဖေးထမင်းဆိုင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ရွှေစည်တော် ဘူဖေးပိုင်ရှင်ပဲ။ ဒီဆိုင်က ဒီကနေ့အထိ နေပြည်တော်မှာ အကြီးဆုံး မြန်မာဘူဖေးဆိုင်ကြီး။ ဆိုင်အပြင်အဆင်နဲ့ အခင်းအကျင်းကို ကြည့်ရုံနဲ့ ဘယ်လောက် ချမ်းသာလဲဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ ကြားထဲက လူတွေ ကောက်လို့ ရတဲ့ အလှူငွေလောက်တော့ သူတို့မိသားစုက ရယ်တာပေါ့။
ပြောချင်တာက ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်တို့ မိသားစုတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက အများထင်ထားကြသလောက် ချို့တဲ့နုံချာ ပေးစာကမ်းစာနဲ့ ရပ်တည်ရမယ့်လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဒါကို မသိဘဲ သနားစရာကောင်းအောင် ဇတ်လမ်းဆင်ရေးနေတဲ့သူတွေနဲ့၊ မဆီမဆိုင် အလှူငွေတွေအတင်းကောက်နေတဲ့သူတွေကို ပြည်သူများ သတိထားနိုင်အောင်လို့ ပြောတာပါ။
Source ; Akon Thi , The Ladies News , Aung Thet Htut ,Ag Ko Ko , Khaing Zaw & ထက်ဦး
မှတ်ချက် - ယခုသတင်းစုစည်းမှုတွင် ရင်းမြစ် တစ်ခုချင်းစီ၏ သတင်းမှန်ကန်မှု / မှားယွင်းမှုတို.ကို မိမိတို.အနေဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုချက် ပေးမည်မဟုတ်သလို ထင်မြင်ချက် ပေးမည်လည်းမဟုတ်ပဲ တွေ.ရှိရသော သတင်းများကို စုစည်းဖော်ပြခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည် ။
Posted by ဇာမဏီ at 3:17 PM
Labels: How.. Who and What Happen Now ?, မှုခင်းသတင်းများ
၀ါးခယ်မရဲ. လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် နဲ. နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ....
မြို.လေးရဲ. သင်္ကြန်ရက်များ ( ၁၃၇၉ / ၁၃၈၀ )
ဒုရဲမှုး မိုးရန်နိုင် သတင်းများ စုစည်းမှု - ၂
F 117 Stealth ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ် ဆိုသည်မှာ
S 400 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ် ဆိုသည်မှာ
တံတားညီနောင် တိုက်ပွဲ - ဖားကန်. သတင်းစုစည်းမှု